Sawiro taxan: Ma jiro wax xuubka bikirka ahi - Youmo
Bildspel: Det finns ingen mödomshinna - somaliska
Dad badan ayaa aaminsan inuu jiro xuub daboola siilka, kaas oo tusaale ahaan jebi kara haddii aad galmo samaysid ama aad isticmaashid tampong. Taasi run ma aha. Haddii uu xuub jiri, lahaa ayaanu dhiiga caadadu ka soo bixi karri laheyn. Furitaanka/daloolka siilka ayaa u ekaan karta siyaabo kala duduwan, laakiin ma jiro wax xuub ahi.
Dad badan ayaa aaminsan inuu siilka dhiig ka yimaado marka ugu horeysa ee aad galmo sameysid. Laakiin dadka intooda badan ma dhiigaan galmada ugu horeysa. Siilku waa uu kala baxaa oo uu qoyaa markaad galmo rabto. Sidaa daraadeed ayaanad u dhiigeynin haddii gus, faraha ama wax kale halkaas la galiyo.
Lagama arki karro siilka ama meel kale oo jidhka ku taala, haddii aad galmo sameysay ama wax kale halkaas la galiyey. Xataa dhakhtar ama kallaaliso ayaan taas arki karin. Waxa jira baaritaano loo yaqaanno kantoroolka/baadhitaanka bikrad ahaanta. Waxba si sax ah uma soo saaraan/sheegaan kuwaasi, waana laga mamnuucay Iswiidhan.
Ma waxaad ka welwelsan tahay in qof kugu xanaaqi doono, maxaa yeelay adiga ama qof aadan la galmooneyso ayaan dhiigin? Mise qof ayaa isku dayaaya inuu kantaroole/baaro inaad galmo soo sameysay iyo in kale? Waxaad heli kartaa caawimo! Waxyaalahan ayaad sameyn kartaa:
La soo xiriir mid ka mid ah ururrada shaashada xogtu ku yaala ee qoraalkan hoostiisa ku dhigan. Waxay caawiyaan dad badan oo xaaladaad oo kale ku jira.
U tag ungdomsmottagningen.
U tag elevhälsan.
U sheeg qof weyn oo aad ku kalsoon Malaha waxaad tusi kartaa qoraalkan?
La soo xiriir Booliiska ama socialtjänsten (adeega bulshada) haddii aad ka cabsooneyso in qof ku waxyeeleeyo.
Halkan ayaad sidoo kale caawimo ka heli kartaa
Uma baahnid inaad sheegid magacaaga markaad la hadleyso ama qoraal ahaan kula sheekeysaneyso meelahaas. Waxay ku hadlaan luqado badan.
RSU: Xuubka bikrada